Na mmalite nke ụbọchị ọkụ, mgbe anyanwụ na-amalite na-egbuke egbuke, iko dị iche iche dị oke mkpa. Na, ị na-ahọrọ ụdị ngwa ahụ, ọ bara uru ịchọta ọ bụghị nanị na ịma mma ọpụpụ ya, kamakwa na ndị ọzọ, enweghị àgwà ndị dị ala. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ nwanyị nwere akụkụ occipital mara mma, ọ na-esiri ike ịchọta ihe kwesịrị ekwesị. E kwuwerị, ọtụtụ ogwe aka, na-etipịa isi ha, mee ka onye nwe ha ghara inwe nchekasị. Otú ọ dị, ọ bụ iko ndị Persol nwere ihe jikọrọ ihe jikọrọ ya na ụdị ihu ọ bụla, na ogwe aka anaghị agbanye isi. Usoro Meflecto (nke na-eme ka ihe atụ dịkwuo mma) mepụtara na 1930, ụlọ ọrụ ahụ amaghịkwa ya. Ọ bụ nke a nke na-enye iko ndị na-edozi ụdị ọ bụla. Na mgbakwunye, na mgbakwunye, ụdị ọ bụla dị mma na mbido mbụ, nke na-eme ụdị ngwa ahụ kachasị mma n'etiti ngwaahịa ndị ọzọ.
Ugogbe anya anwụ nke Persol
Ọdịdị nke ngwa ọ bụla maka ndị inyom ejiji na-arụ ọrụ dị mkpa, n'ihi na ịchọrọ ka ọ bụghị naanị mara mma, kamakwa na dum dum kwekọrọ na ibe ha. Ma ebe ọ bụ na ihe ndị na-eme ka anyanwụ bụrụ ihe mbụ dị mkpa n'oge okpomọkụ, ọ bụ ihe atụ Persol nke ga-aghọ ihe dị mkpa nke ihe oyiyi ọ bụla, na-emesi ịdị mma ya na enweghị ọgụgụ isi ya ike . Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ugogbe anya maka anwụ na anya m anya gburugburu na etiti dị mkpa ma ọ bụ ihe atụ a na-ahụ anya. Coquette ga-ahụ ihe nkiri ndị mara mma, na ụmụ nwanyị mara mma nke ejiji na-ejiri osisi ndị dị iche iche na-ejikọta agba dị iche iche.
Kwa afọ, ndị na-emepụta na-emepụta ụdị dị ịtụnanya na, mgbe ha na-echekwa ọdịnala ha, dabara adaba n'ụzọ zuru ụwa ọnụ. Otu n'ime ihe ngosi nke ihe ndị Persol bụ akụ dị na arches, nke dị ka ube. Na, n'agbanyeghị eziokwu ahụ aha a dị n'akụkọ ihe mere eme nke ika ahụ agbanweela ọtụtụ ugboro, Otú o sina dị, ọ ka bụ akụkụ pụrụ iche nke ngwaahịa niile.
Ihe ịchọ mma n'olu
Nri ọka Loewe
Kedu otu esi ahọrọ ugogbe anya uzo n'ile ihu?
Azu akpụkpọ anụ nke ụmụ nwanyị
Agbamakwụkwọ yiri mgbaaka
Donna Karan akpa
Ihe kacha mma
Akpụkpọ ụkwụ Corset - ihe ga-eyi uwe a?
Akpa akpa - ihe kachasị mma nke oge ọhụrụ
Mgba na nkume
Jam na udara plums - 10 ọtụtụ delicious Ezi ntụziaka
Usoro nhazi na pelvis
Ogige osisi na-ere osisi
Ụdị maka gingerbread
Kedu otu esi akpọ aha nwa nwoke isi awọ nke nwa nwoke?
Esi ewepu ntutu ihu?
Akwukwo unyi - oma na ihe ojo
Ihe ndozi ụlọ ịsa ahụ
Crafts maka ụmụaka sitere na ọka
Kedu otu esi ahọrọ ihe nkpuchi bed?
Ụbọchị Mba maka Nchebe nke Layer Layer
Kedu otu esi eme ntutu isi?
Gini mere o ji di mkpa ka i rie otutu akwukwo nri na nkpuru?
Izu anọ nke ime ime site na ime
Necrosis nke anụ ahụ
Colds na nwamba - mgbaàmà
Hypochondria - mgbaàmà na ọgwụgwọ ọrịa hypochondriacal